जथाभावी मास्क फाल्ने प्रवृतिले बैतडीमा कोरोनाको जोखिम बढ्दो ! – Sodhpatra
जथाभावी मास्क फाल्ने प्रवृतिले बैतडीमा कोरोनाको जोखिम बढ्दो !
प्रकाशित : ५ आश्विन २०७७, सोमबार १९:०९ September 21, 2020
बैतडी: कोरोना भाइरस सङ्क्रमण बढेसँगै बैतडीमा पनि मास्क लगाउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। यद्यपि मास्क प्रयोग गरिसकेपछि जथाभावी फाल्ने प्रवृत्तिले सङ्क्रमणको जोखिम पनि त्यतिकै बढाएको छ। सडक, सडकपेटी र बजारक्षेत्रमा प्रयोग भएको मास्क जथाभावी फालिएकाले जोखिम बढ्दै गएको हो।